Shirka Somalia iyo Somaliland oo furmayo - BBC News Somali
Shirka Somalia iyo Somaliland oo furmayo
18 Juunyo 2012
Image caption Shirka Somalia iyo Somaliland ayaa London ka furmaayo arbacada
Maalinta arbacada waxaa magaalada London ka furmi doono wadahadal u dhaxeeya Somalia iyo Somaliland.
Wasiirka Amniga Qaranka iyo Arimaha Gudaha ee DKMG Cabdi Samad Macalim Maxamuud oo hogaaminayo wafdiga DKM ah uga qeyb-gelaya shirka magaalada London ayaa waxa uu sheegay in uu rajeynayo in wax wanaagsan uu ka soo baxo shirka.
Cabdisamad waxaa uu BBC u sheegey in wadahadalka uu yahey kii ugu horreyey ee dhaco muddo 20 sano ah.
Wasiirka waxaa uu rajo ka muujiyey in si wanaagsan uu ku dhamaan doono wadahadalka. Cabdisamada waxaa uu amaaney wafdiga ka socdo dhanka Somaliland, waxaa uuna intaasi raaciyey in fikradda labada dhinac ay isu dhawdahay, in kasta oo uu sheegey in ay dhici karaan waxyaabo ay isku khilaafsanyihiin.
Somaliland ayaa horey u sheegtey in wadahadalku aanay noqoneyn kuwa looga noqonaayo madaxbanaanidii ay ku dhawaaqeen 21 sano ka hor. Madaxweynaha Somalia Sheikh Sharif ayaa isaguna sheegey in wadahadalku looga gol-leeyahay in lagu sugo midnimada Somalia.